Inoculant Factory, Suppliers - China Inoculant Manufacturers
Igwe anaghị agba nchara Shot
Bee Waya Shot
Akwụkwọ & Sọpụrụ
Rolọ ọrụ Ferroalloy
Rlọ Ọrụ R & D
Gingkpụzi ígwè bọl
Iburu Angular Steel Grit
Carburizer, nke a makwaara dị ka onye na-ahụ maka carburizing ma ọ bụ carburant, bụ ihe mgbakwunye na nchara ma ọ bụ nkedo iji mee ka ọdịnaya carbon dịkwuo elu. A na-eji carburizers maka nchara anụcha Carburizers na ihe nkedo Carburizers, yana ihe mgbakwunye ndị ọzọ na Carburizers, dị ka ihe mgbakwunye breeki breeki, dị ka esemokwu esemokwu
Ferro sịlịkọn barium inoculant bụ ụdị FeSi dabeere alloy nwere ụfọdụ ego nke barium na calcium, ọ nwere ike n'ụzọ dị ịrịba ama belata zuo ike onu, na-amụba obere fọduru. Ya mere, Ferro silicon barium inoculant dị irè karịa inoculant nke nwere nanị calcium, na mgbasa ozi
Onye na-azụ onwe anyị (ReMgSiFe)
Nodulizer bụ ihe na-eri ahụ nke nwere ike ịkwalite ịmepụta eserese nke spheroidal site na mkpụrụ osisi graphite na usoro mmepụta. Ọ nwere ike ịzụlite eserese eserese na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke graphite spheroidal dịkwuo elu ka ọrụ ha wee meziwanye. N'ihi ya, ductility na ike
Ferro silicon strontium nucleating n'ụlọnga bụ ụdị FeSi dabeere alloy nwere ụfọdụ ego nke barium na calcium, ọ nwere ike n'ụzọ dị ịrịba ama belata zuo ike onu, na-amụba obere fọdụrụ. Ya mere, Ferro sịlịkọn barium inoculant dị irè karịa inoculant na naanị nwere calc
Silicon Calcium Deoxidizer nwere ihe ndị dị na silicon, calcium na ígwè, bụ ezigbo ngwongwo deoxidizer, onye na-ekpochapụ desulfurization. A na-ejikarị ya eme ihe na igwe dị elu, obere carbon steel, mmepụta igwe anaghị agba nchara na nickel base alloy, titanium alloy na mmepụta alloy ndị ọzọ pụrụ iche.
Ferro silicon magnesium Nodulizer na-echegharị alloy composing nke obere ụwa, magnesium, silicon na calcium. Ferro silicon magnesium nodulizer bụ ezigbo nodulizer nwere mmetụta dị ike nke deoxidation na desulfurization. Ferrosilicon, Ce + La mish metal ma ọ bụ obere ụwa ferrosilicon na magnesium bụ
AdreesịTengzhou City, Shandong Province, China
Oge ọrụ8:00 am-18: 00 pm Monday ruo Saturday